R/W Rooble oo soo saaray qoraal culus oo ku socda madax goboleedyada - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
R/W Rooble oo soo saaray qoraal culus oo ku socda madax goboleedyada
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa manta qoraal loogu yeeray mid xusuusin ah u kala diray madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka.
Heshiiska ayaa waxaa ku dhigan in xubnaha laga soo magacaabo 10-ka illaa 20-ka October, taasi oo macnaheedu yahay in madax goboleedyada ay weli haystaan saddex beri oo kale.
Si kastaba, Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa madax goboleedyada ka Codsaday inay ugu dambeyn Magacyada xubnaha labada Guddi soo gudbiyaan 20-ka Bishan Octoober 2020, iyadoona la tix-gelinaayo ka qeyb galka Haweenka.
Inkasta oo Rooble u muuqdo inuu ilaalinaya heshiiska doorashooyinka iyo sidii uu waqtigiisa ugu fuli lahaa, ayaa haddana waxaa xusid mudan inuusan weli dhisi xukuumaddii dalka gelin lahayd doorasho.
Hoos ka aqriso qoraalka Rooble